မြန်မာနိုင်ငံ | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား အဆောက်အဦးပိုင်း နှင့် ဗိသုကာ အလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား အဆောက်အဦးပိုင်း နှင့် ဗိသုကာ အလုပ်အကိုင်များ
Site supervisior completes construction projects by planning, organizing, and controlling projects; completing quality inspections; supervising sub-contractors and staff. Construction projects require coordination between many different contributors.
Site supervisior completes construction projects by planning, organizing, and controlling projec ...
Graphic Designer_ (M/F)_(5) Post
ရှိ ထိပ်တန်းကုမ္မဏီများမှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား အဆောက်အဦးပိုင်း နှင့် ဗိသုကာ အလုပ်အကိုင်များ ကိုရှာဖွေလိုက်ပါ။ အွန်လိုင်းမှအလွယ်တကူလျှောက်ထားပြီး အလုပ်အသိပေးချက်များအတွက် စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။